सेक्युरिटी गार्डमा दुवई जान के के चाहिन्छ र कतिसम्म आम्दानी हुन्छ ?
Thu, Aug 13, 2020 | 19:49:33 NST
Total Hits: 66.4 K
प्रश्न : म दुवईमा सेक्युरिटी गार्डका लागि जान चाहन्छु । त्यसका लागि शारीरिक मापदण्ड के–के हुनुपर्छ ? जानुभन्दा अघि सरकारले तालिमको व्यवस्था गरेको छ कि ?
उत्तर : बलबहादुर तामाङ, अध्यक्ष नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - सेक्युरिटी गार्डमा जानका लागि कम्तिमा ५ फिट ५ इन्च उचाइ हुनुपछ र अँग्रेजी भाषा पनि जानेको हुनुपर्छ । त्यस्तै सेक्युरिटी सम्बन्धि काम गरेका र तालिम लिएकाले मात्रै जान पाउँछन् । शारीरिक रुपमा पनि तन्दुरुस्त हुनुपर्छ ।
त्यस्ता देशमा सेक्युरिटी गार्डमा गएकाले ७० हजार तिर्नुपर्छ र ३० हजारदेखि बढीमा ८० हजारसम्म कमाउन सक्छ ।